'UMTSHAKAZI WENKOSAZANA' WAPHOSA UKUHLANGANA KWAKHONA UKUZE AFUNDE ISKRIPTHI ESIBONAKALAYO KUNYE NENGXOWA MALI - IINDABA
'Umtshakazi weNkosazana' waphosa ukuhlangana kwakhona ukuze afunde iskripthi esibonakalayo kunye nengxowa mali
Abalingisi beNkosazana enguMtshakazi baya kuphinda badibane phantse kufundwa iskripthi senkcubeko yemveli ka-1987, njengesixhobo sokuxhasa ngemali kwiDemocratic Party yaseWisconsin.
UCary Elwes, uRobin Wright, uCarol Kane, uChris Sarandon, uMandy Patinkin, uWallace Shawn kunye noBilly Crystal bazakuthatha inxaxheba, bekunye nomlawuli uRob Reiner kunye noPatton Oswalt abongamela i-Q & A emva koko. Ixesha lokuhlala lihleli liya kubanjwa ngentsimbi yesine ye-PM nge-13 kaSeptemba.
Umnyhadala uyonyusa imali yokuhlanganisana kwezentlalo, ngokusayina kunye nomrhumo ofunekayo ukuze ujonge nangona kungekho buncinci. Indibano yoluntu iyayithengisa ngeentengiso zedijithali kunye namajelo eendaba ezentlalo.
I-Wisconsin ngokuqinisekileyo yenye yeendawo ezintathu zemfazwe eziluhlaza okwesibhakabhaka ezithi uDonald Trump watyibilika ngo-2016. UJoe Biden noTrump babetyelele eKenosha kule veki.
Kwipapasho losasazo elalisungulwe ngokudibana kukarhulumente, u-Elwes wathi, ndiyakholelwa ukuba abantu abaninzi bayazi ngoku ukuba uDonald Trump uwushiye ngokupheleleyo umsebenzi wakhe njengoMongameli ukufuzisela nokuvela kwabo bonke abantu baseMelika. Uye wasilela ukugcina uhlanga lukhuselekile kwi-COVID-19 kwaye ngenxa yoko unoxanduva lokuphazamisa isiphithiphithi, ubundlobongela kunye nokuwa kwemali esijamelana nazo okwangoku.
Wongeze wathi, ukuba iMelika iza kuba nokwenzeka kunyango kufuneka siyisuse iTrump. Kwaye kuyenzeka kuphela ukuba siphumelela iWisconsin. Kuyandichulumancisa ukuba yinxalenye yale ndibano ingaqhelekanga kakhulu yoogxa bam abavela 'kwiNkosazana enguMtshakazi' njengendlela yokuphucula ukuqonda kunye nokufumana imithombo kurhulumente onokuthi athathe isigqibo ngekamva laseMelika.
UBen Wikler, usihlalo weDemocratic Party yaseWisconsin, wathi, Unyulo luka-2020 lufana 'neNkosazana enguMtshakazi': izigebenga, izilo, ukusukela, ukubaleka, imimangaliso. Kuyasivuyisa ukuba phakathi kweenkwenkwezi ezigqwesileyo zehlabathi eziba lilungu lethu lokuhlaziya umlingo wefilimu yam endiyithandayo kwiplanethi kwaye sincede ngokukhuselekileyo ukuhamba kumgxobhozo wezopolitiko zaseWisconsin.
U-Elwes ukongeze umsitho kwi-Twitter ngoLwesine.
Izigaba: Tech-Iindaba Amazon-Prime Inetflix
ilitye elibandayo uSteve austin umfazi kristin feres
Isizathu se-13 sokuba kutheni iwiki
Umdala kangakanani umyeni ka-emily riemer
Bachelorette abaphangi bokwenene steve ophumeleleyo
uvota njani agt